विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई ‘शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप’ (भिडियोसहित)
आर्थिक अभावमा उच्च शिक्षा पढ्न समस्या भएको छ ? के तपाईंले इच्छाअनुसारको विषय पढ्न पाउनुभएको छैन ? पैसा नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? ऋण काडेर सन्तानलाई पढाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
अब तपाईंको समस्या डिजिटल पत्रिका शिलापत्रले समाधान गर्नेछ । गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीका लागि शिलापत्रले ‘शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप’ अन्तर्गत पढाउनेछ । आठ विद्यार्थीका लागि ५० लाखबराबरको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसका लागि तपाईंले ‘नेपाल एडुफेयर डटकम’ मा स्कलरसिप फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । फारम भरिसकेपछि स्कलरसिप परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ ।
५० प्रतिशत लिखित परीक्षा, ३० प्रतिशत कलेजको अन्तरवार्ता र २० प्रतिशत एसईई र प्लस टुको ग्रेडलाई पनि मापन गरिनेछ । लिखित परीक्षाअन्तर्गत दुई चरणको परीक्षा सकिएको छ । तेस्रो चरणको लिखित परीक्षा आमागी मंगलबार बिहान ८ बजे हुनेछ । कार्यक्रमका संयोजक सुरेश सिम्खडाका अनुसार स्कलरसिपका लागि २ हजार ५ सय बढीले फम भरेका छन् ।
‘आर्थिक अभावमा रहेका गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीका लागि शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिपअन्तर्गत पढाउन लागेका हौं,’ संयोजक सिम्खडाले भने, ‘यो हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि हो ।’
उनका अनुसार शंकरदेव कलेजको बीबीए, राजधानी मोडेल कलेजको बीएचएम, टेक्सास कलेजको बीआईटी, मेधावी कलेजको बीसीआईएस, ग्लोबल इन्टरनेसनल कलेजको बीटीटीएम, नेपाल मेगा कलेजको बीबीएम, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टको बीबीएस, के एन्ड के कलेजको बीएसडब्लूूमा स्कलरसिपको व्यवस्था गरिएको छ ।
शिलापत्रको आयोजनामा भर्चुअल शैक्षिक परामर्श मेला पनि चलिरहेको छ । परामर्शमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । अहिलेसम्म ६० हजार बढिले नेपाल एडुफेयर डटकम भिजिट गरेर शैक्षिक परामर्श लिएका छन् । मेलाबाट घरै बसीबसी चाहेको शैक्षिक संस्थाको लबी, ल्याब, लाइब्रेरी, कक्षाकोठा, हलदेखि सबै संरचना र सुविधाका विषयमा बुझ्न सकिन्छ । भर्चुअल मेलामा मिटिङ प्वाइन्टको व्यवस्थापन र नयाँ पत्रिकाको सहकार्य रहेको छ ।
भर्चुअल शैक्षिक परामर्शको आकर्षण : ५५ हजार भिजिटर
विद्यार्थीको अभिभावक : नेपाल एडुफेयर
विद्यार्थीको सारथी : भर्चुअल शैक्षिक मेला
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २६, २०७६, ०१:५५:००